ရာစုနှစ်များစွာအတွက်, အဟောင်းတွေမျိုးဆက်အငယ်ပုံပြင်များပြောပြ, Epic, ဥပမာအမျိုးမျိုးတို့ကို, etc ခဲ့သည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတစ်နည်းလမ်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထွက်ပေါ်လာပါပြီအကငျြ့မြားနှငျ့အလေ့အကျင့်၏အတွေ့အကြုံ, စည်းမျဉ်းများလွှဲပြောင်းမသာဖြစ်ကြသည်။ ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - ကလည်းကုသမှုတစ်ခုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - ကဘာလဲ?
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်ဝိညာဏ်တိုးချဲ့ရန်, ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်ဆံဖို့နဲ့အတွင်းစိတ်စိုးရိမ်မှုတွေနှင့်ရှုပ်ထွေးသောခုခံတွန်းလှန်ဖို့သင်ယူဖို့ခွင့်ပြုမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးမခြင်းနည်းလမ်းနဲ့တူအများအပြားကျော်ကြားစိတ်ပညာရှင်များကလေ့လာခဲ့ထားပြီး - ။ အချိန်မော်ကွန်းလူကြီးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စသည်တို့ကို Freud Zinkevich-Evstigneeva, လစ်စင် Vachkov, အထူးသဖြင့်အရေးပါမှု၏, သားသမီးတွေအတွက်နတ်သမီးပုံပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
နတ်သမီးပုံပြင်ကုသမှုဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်တာဝန်များကိုဖြေရှင်းဖို့ပညာရှင်များကူညီပေးသည်။ psychotherapy အတွက်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင့်အထူးသဖြင့်ဦးတည်ချက်မပေးပုံပေါ်နှင့်သင်ယူနိုင်ခြင်း, စိတ်ပညာ, psychotherapy, ဒဿနနှင့်များစွာသောယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာများ၏အောင်မြင်မှုများရှိကြတယ်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာများ၏အဖြေအမျိုးမျိုး - ရန်လို, ဆုတ်ခွာ, phobias, ကြောက်စိတ်နှင့်အခြားပုံပြင်များဆုံးမပဲ့ပြင်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုချေးငှားရမည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအတွက်အထူးအခန်းကဏ္ဍဟာဥပစာပါဝင်သည်။ တိကျစွာအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောဥပစာစကား skazkoterapevticheskogo ဧည့်ခံ၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။
ထို့အပြင်စီ client ကိုအနုပညာ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှာနေသည် - ကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါစသည်တို့ကိုစုံထောက်, အချစ်ဇာတ်လမ်း, စိတ်ကူးယဉ်, ဒဏ္ဍာရီ, မော်ကွန်း, ဒဏ္ဍာရီပင်ကောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဆွဲရန်တစ်ခုခုမလိုအပ် :. လုပ်ငန်းခွင်တစ်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း, အတွင်းအဆင့်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွမ်းကျင်သောပြဿနာများ၏ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အလွန်အကြောင်းပြချက်ဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးနှင့်ဤအဓိကအားသာချက် skazkoterapii ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - နတ်သမီးပုံပြင်မျိုး
ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များတစ်ဦးချင်းစီအဘို့သားသမီးရဲ့ကိစ္စများနှင့်အခြားသူများကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများ skazkoterapii ဖြစ်ကြသည်အမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြားထားတယ် .:
စသည်တို့ကို Zinkevich-Yevstigneyeva လည်းရိုးရာအနုပညာ, မူရင်းရိုးရာပုံပြင်ကဒီစာရင်းပါဝင်သည်။ မြှင့်တင်ရန်အရာမှော်နှင့်အံ့ဖွယ်အထဲတွင်အမျိုးသားဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီ, သယ်ဆောင်ရန် ဝိညာဉ်ရေးရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ကျတာ၏စေ့စေ့ရုန်းကန်မှုများကိုပွငျဆငျပွီးရွှေ့ကူညီဖို့ရန်, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်, တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ထိတ်လန့်ပုံပြင်များအမြိုးမြိုး။ အနုပညာအကျင့်ကိုကျင့်သမျှသောအတှေ့အကွုံဆံ့နှင့်အတိတ်စဉ်မြေးဆက်နှင့်မူပိုင်ခွင့်၏အောင်မြင်မှုများမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ဤအခြေအနေမှထွက်လမ်းမရှိသောရှုမြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ fudge ။
ကလေးတစ်ဦးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ မှတဆင့်ကလေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အသက်ရှင်ရန်သိတော့ကျွန်တော်ကြားလျှင်, ကိုယ်ကျင့်တရားအရေးပါသောရရှိသည်, လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလက်ခံခဲ့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အမူအကျင့်များ၏စံချိန်စံညွှန်းချမှတ်။
လူကြီးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်များအခြားသူများကိုစောင့်ရှောက်, တာဝန်ယူမှု, ဘဝပြဿနာများကိုခုခံဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤပုံပြင်များအတွက်ကောင်းသောအစဉ်အမြဲမကောင်းသောအမရဘဲပေမယ့်ဇာတ်ကောင်အောင်ပွဲကိုခံအမှန်တရားရဖို့အလုပ်လုပ်ရှိပါတယ်။
ဇာတ်ကြောင်း - norrativa tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပြုအမူများ၏မှန်ကန်သောပုံစံကိုထုတ်ပေးသောမိမိဇာတ်ညွှန်းပေါ်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်စည်းကြပ်ဖို့နားထောင်ခြင်း။
Psychotherapy ။ Skazkoterapiya ပြဿနာများ, ဖယ်ရှားပစ်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကူညီပေးသည် phobias နှင့်စိုးရိမ်မှုများ ။
ဤရွေ့ကားပုံပြင်များတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထောင့်ကနေအခွအေနကိုကြည့်ဖို့ကူညီဖြစ်ရပ်များ၏နက်ရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုထုတ်ဖေါ်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းရှိသည်မဟုတ်ပေမယ့်အမြဲနှလုံးပါနှင့်အမြင်အဓိပ္ပာယ်ကို။ စတာတွေကလူမိသားစုနှင့်၎င်း၏ဒုတိယတဝက်လေးစားမှုနှင့်အတူအသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားစေ skazkoterapii ထိုသို့သောနည်းစနစ်, အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်သေခြင်း၏ပြဿနာများ, အခြားအရသောအခါအဆိုပါအထူးကုရှိသူများကိစ္စများတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုအသုံးပြုသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ် ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။ ရွေးကောက်တော်မူသောအကြောင်းအရာအပေါ် philosophizing အားဖြင့်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းလမ်းကသူ့ပြဿနာကိုနားလည်ကြောင်းထဲကအပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းကိုရှာဖွေသူငယ်ကိုကူညီပေးသည်။ သငျသညျက၎င်း၏အခြေခံအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးအခါတူညီပြဿနာကို တင်. ပေမယ်ပြီးသားရှိပြီးသားမရှိတိုက်ရိုက်အကြံအစည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်ကြောင်း၏သင်တန်းတွင်ကလေးတစ်ဦးစိတ်ပညာရှင်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှအစားထိုးအတွေ့အကြုံကိုပေါ်ထွက်လာ။ အထူးကုလုပ်ကိုင်ပုံပြင်များ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားနေသောသူများသည်ဇာတ်လမ်းထဲမှာအဓိကဇာတ်ကောင်ကအမြဲတမ်းကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြောင်းဖြေဆိုနိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကအခက်အခဲများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကနေသင်ယူဖို့, လက်ျာဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်နာမကိုအမှီထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များဘာဝနာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ကြောင်းကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ အချို့သောအခြေအနေများအတွက်သူတို့ကိုဖတ်ရန်: အဆိုပါအပန်းဖြေဂီတခွင့်နှင့်သက်သာအနေအထားယူပြီးအပါအဝင်အလင်းအိမ်မှိန်။ ဒီနည်းပညာ skazkoterapii, shaped အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံကစုဆောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံစိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားပစ်ရရန်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမော်ဒယ်ဖန်တီးသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလားအလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ၏ဤအမျိုးအစားတစ်ဦးကထူးခြားတဲ့ feature ကိုဘေးဥပဒ်ကိုဇာတ်ကောင်များနှင့်ပဋိပက္ခများကိုတစ်ဦးပြည့်စုံမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီအမျိုးအစားအများဆုံးရိုးရှင်းပြီးအတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။ မူကြိုနှင့်မူလတန်းကလေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအခါမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် skazkoterapii နည်းလမ်းများထိုသူငယ်အချို့သစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှု, အသိပညာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆိတ်သငယ်အိမ်မှာလုပ်ဆောင်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်အကူညီပေးသည်ရလဒ် fix ။ Didactic ပုံပြင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဥပမာ, လူကြီးများအတွက်ရည်ရွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်သူတို့ကယဉ်ကျေးများနှင့်အလိမ္မာ, လမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူနှင့်အခြားသူများသင်ယူဖို့ကူညီခြင်း, ကလေးငယ်များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုကြသည်။
ဇာတ်လမ်းပြီးသားတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား Dramatize ။ ဆိုလိုသည်မှာသည်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာကစား။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးမခြင်း၏နည်းလမ်းအဖြစ် Skazkoterapiya, ထိုအရေးအသားဒါခေါ် client ကိုပုံပြင်ကြီးမြတ်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဇာတ်လမ်းသူ့ဟာသူ၏အရေးအသားသုံးခြေလှမ်းများအတွက်ဖျော်ဖြေနေသည်:
အဆိုပါကျဆင်းမှု။ ဤသည်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဝေဒနာတွေနဲ့လူ့ပုံပြင်အရေးအသားအပေါ်ကို set up ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါစိတ်ပညာရှင်သူ့ကိုအချို့အာရုံပူဇော်နှင့်ပုံဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်သရွတ်နှင့်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာညှိကူညီပေးသည်နှင့်အထူးရွေးချယ်ထားသည့်ပုံပြင်များကိုဖတ်ပါ။
ပုံပြင်များကိုရေးသား။ ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုရဲ့စက္ကူဖို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်း, ခံစားခကျြမြားနှငျ့စိတ်ခံစားမှုမှော်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ပုံစံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်းဇာတ်သိမ်း Reading ။ ဒီအဆင့်မှာ client ကိုယင်း၏သမိုင်းအထူးကုဖတ်, ပြီးတော့အတူတူသူတို့ကဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်, ငါဆိုသည်ကားဖို့လူလိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ Lucky Star ၏ပုံပြင်။
အဆိုပါ Triune ပြည်နယ်တွေအကြောင်းပုံပြင်။
သားကောင်စိတ်ပညာ - လူကြီးများအတွက် skazkoterapiya
အများအပြားကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်သားကောင်ရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အတူလူကိုကူညီတဲ့ကုထုံးအဖြစ်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များကို အသုံးပြု. ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားမိန်းမတို့အဘို့ထိုကဲ့သို့သောနတ်သမီးပုံပြင်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကြားတဲ့စာရေးဆရာ Mikhail Odintsov နှင့်သားကောင်များ၏စိတ်ပညာ "သူ့စာအုပ်ကိုခေါ်။ လူကြီးများအတွက်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်။ " သူမ၏အလုပ်မှာတော့သူမ "သားကောင်" သူ့ဟာသူ၏အယူအဆမှရှင်းပြသည်အပြုအမူ၏ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်ကြီးထွားဖို့ခွင့်မပြု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွမ်းရည်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ Skazkoterapii ရည်မှန်းချက် - ကို defeatist စိတ်ဓာတ်ကျော်လွှားအသစ်တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ဖို့ - ဘဝတီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အဆင့်အထိ။
ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - ယုံကြည်မှု
မလုံခြုံသောလူကြောင့်အမရေရာ၏, ရိုးရှင်းစွာမပြည့်မများမှာ - ဤအဝိဇ္ဇာသည်။ ဒါကြောင့်တန်ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော် "ကလုပ်ပါနှင့်အဲဒီလို" လို့မရပါဘူးတိုက်ရိုက်ငျြ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို dictate နှင့်ဆိုတတ်ကြ၏။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးငယ်များနှင့်အတူရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ပြောင်းပေးဖို့လူတွေကိုအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်ဘာမှစည်းကြပ်ဘူး, dictate ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
Skazkoterapii အလေ့အကျင့်ပညာရေး, စိတ်ပညာ, ဒါပေမယ့်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်မသာချွတ်ချေ။ အမျိုးမျိုးသောသင်တန်းများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများမှာကျွမ်းကျင်သူများလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သွန်သင်သောပုံပြင်များ၏စံနမူနာကိုးကား။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစွမ်းထက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးတကြီး skazkoterapii မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ နတ်သမီးပုံပြင်ပုံပြင်များကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေနှင့်အခြားသူများ၏ပျက်စီးခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီပေးနေ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသရုပျဖျော။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျစျေးကွက်ပေါ်တွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အဖွဲ့သည်အမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် - စာအုပ်တွေ
"ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်: တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်မှတဆင့် Self-ဝိညာဏ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို" IV Vachkov ။ ဆရာ, ဆရာမ, ကုသ, ကျောင်းသားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ skazkoterapii အပေါ်သူ၏စာအုပ်။ သူတို့သည်ငါ၏အသက်တာ၌ကကူညီလိမ့်မည်ဟုအသိပညာဆည်းပူးဖို့, အိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အလားအလာစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
"Fairy Tales နှင့်နတ်သမီးပုံပြင်ကုထုံး" ဃ Sokolov ။ အဆိုပါစာအုပ်အလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်ဇာတ်လမ်းတွေအားဖြင့်ကုထုံးရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ စိတျနှလုံးမှာပုံပြင်ပြောပြရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီနှင့်စာရေးဆရာသူ့ကိုယ်သူအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီကုထုံးနည်းစနစ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာလူနာနဲ့အစစ်အမှန်ကုထုံးအလုပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
"Psychotherapeutic ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များနှင့်ဂိမ်းများ" လုပ် SA Chernyaeva ။ အဆိုပါထုတ်ဝေနေတဲ့အလွသမိုင်းသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့လမ်းညွှန်ချက်များပါရှိသည်။ အလုပ်နှင့်ကုထုံးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဂိမ်း၏ဖော်ပြချက်များ၏ဥပမာများ။ Skazkoterapiya ပူပကလေးများ, စိတ်ပညာရှင်, ဆရာများနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူမိဘများကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Phlegmatic အမြိုးသမီးတ - ဝိသေသလက္ခဏာများ
တွင်းကိုကွောကျရှံ့ - phobia သို့မဟုတ်နာမကျန်းဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရသနည်း
Scarlett Johansson သစ်ကိုရုပ်ရှင်နေစဉ် Romain Doriak, မိမိအဘ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များပြည့်
ပျင်းရိမိန်းကလေး 20 ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကို Hack
တိုးတက်မှုနှုန်း - အဘယ်အရာသည်နှင့်မည်သို့အိမ်မှာနေတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းစေသလော
ပွေး - လက္ခဏာများ
သွေ့ခြောက်သောအရိုးနှင့်အတူငါးကြင်း cutlets - စာရွက်
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲ Marshmallow ကိတ်မုန့်
အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ Gothic အဘိဓါန်စတိုင်
အသုံးဝင်သောနှင့်အာဟာရ "ဆောင်းဦးရာသီ" သုပ်